မင်းတုန်းမင်း | News of Mandalay ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Copy Right News of Mandalay. Powered by Blogger.
Posted by Mandalay News at 9:04 PM0comments
အောက်မြန်မာနိုင်ငံအား ဗြိတိသျှတို့က သိမ်းပိုက် လိုက်ခြင်းကို မြန်မာတို့ မည်သည့် အခါမျှ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ သို့သော် နေပြည်တော်တွင် ဖြစ်ပျက် နေပုံများမှာ၊ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အနည်းနှင့် အများ အသိအမှတ် ပြုသကဲ့သို့ ရှိချေသည်။ ပုဂံမင်း၏ ညီ မင်းတုန်းမင်းသားသည် ဗြိတိသျှတို့ တန်ခိုးအာဏာ မည်မျှ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ကြောင်းကို သိနားလည်သူ ဖြစ်သဖြင့် စစ်မလိုလားသူ တစု၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်၍ လာသည်။ ဤတွင် ပုဂံမင်းသည် မင်းတုန်းမင်းသားကို မလိုမုန်းတီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်၊ မင်းတုန်းမင်းသားသည် ညီတော် ကနောင်မင်းသားနှင့် အတူ ရှေးထုံးနည်း အတိုင်း ၁၈၅၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ရွှေဘိုသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် လေသည်။ ရွှေဘိုတွင် နောက်လိုက်များ စုရုံးပြီးနောက် ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်ရာ အောင်မြင်နိုင်သည့် အခြေသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ မကွေးမင်းကြီးသည် မင်းတုန်းမင်းသားကို ဘုရင် အဖြစ် လက်ခံ ကျေညာ၍ မင်းတုန်းမင်း၏ သစ္စာကို ခံယူခြင်း မပြုသူတို့အား ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း ပြုသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မင်းတုန်းမင်းသားသည် အမရပူရ မြို့တော်တွင်းသို့ ဝင်၍ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်သည်။
ဤသို့ ဖြစ်ပျက် နေဆဲတွင် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗြိတိသျှတို့နှင့် တိုက်ခိုက် နေသော စစ်တပ်များကို ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး ဖြစ်ကာ မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သည်နှင့်ပင် ဗြိတိသျှတို့ကို ခုခံ တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်လည်း ရပ်စဲ သွားတော့သည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် အမြှော်အမြင်နှင့် ပြည်စုံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို နှစ်သက်သော မင်းတပါး ဖြစ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ လက်ထက်၌ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ အင်အားသည် အထွတ်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။ ထိုကြောင့် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ်ဖြင့် တည်တန့် နေစေရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် တည်ထောင်မည်ဟု ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိသော်လည်း အချည်းနှီး ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်ပြီးနောက် ဆောင်ရွက်သည့် ပထမ အချက်မှာ နေပြည်တော်တွင် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားသော ဥရောပ တိုက်သား အားလုံးကို အကျဉ်းမှ လွှတ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စကားဆိုရန် မြန်မာ သံအမတ်များကို စေလွှတ်မည့် အကြောင်း၊ ဗြိတိသျှတို့ထံ စကားပါးလိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်သော နယ်မြေများကား မြေထဲမြို့ မြောက်ဘက်၊ ရခိုင်နယ်စပ်မှ တောင်ငူ မြောက်ဘက်၊ ကရင်နီ နယ်စပ်သို့ တိုင်အောင် အရှေ့ အနောက် နယ်နမိတ်မျဉ်း၏ တောင်ဘက်ပိုင်း တခွင်လုံး ဖြစ်လေသည်။ မကွေးမင်းကြီး ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ သံအဖွဲ့သည် ပဲခူးဒေသ ဝန်ရှင်တော် မင်းကြီးသစ် ဖြစ်သော ဖယ်ရာနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ့ နယ်မြေများကို အဓမ္မ သိမ်းပိုက်ရန် မသင့်ကြောင်း စကား ဆိုကြလေသည်။ ဗြိတိသျှတို့က အောက်မြန်မာနိုင်ငံ (ပဲခူး) ကို ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ကြောင်း မြန်မာများ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ အသိအမှတ်ပြုလျှင် ပြည်မြို့ မြောက်ဘက်ရှိ ဒေသများကို မြန်မာမင်း လက်သို့ ပြန်လည် အပ်နှင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလေသည်။
ဗြိတိန် နိုင်ငံရှိ အစိုးရနှင့် သတင်းစာများကမူ စစ်ပြေငြိမ်းရေး စာချုပ်အား မြန်မာ နေပြည်တော်၌ပင် ရေးထိုး စေရမည် ဟူသော မြန်မာ အသရေ ညှိုးစေမည့် အချက်ကို တဖက်စီးနင်း တောင်းဆို ကြလေသည်။ သို့ရာတွင် ဒါလဟိုဇီသည် မင်းတုန်းမင်းက နယ်စပ်ရှိ မြန်မာ အရာရှိများထံ စစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရပ်စဲရန် အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြား လိုက်သော အခါ ဒါလဟိုဇီသည် မိမိ အလိုအတိုင် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ ရပ်စဲပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်လေသည်။
ဤသို့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲ ရပ်စဲလိုက်သော်လည်း အောက်မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာများက ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသေးသဖြင့် ဗြိတိသျှ တပ်များသည် စစ်တိုက်ရန် အသင့် ပြင်ဆင်ထားလျက် ရှိရသည်။ ဒါလဟိုဇီသည် ၁၉ ရာစု ဥရောပတိုက်သားများ ယူဆသကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားတို့သည် ဥရောပ တိုက်သားတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို လိုလိုချင်ချင် လက်ခံ လိုကြသည်ဟု စိတ်ချ ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အောက်မြန်မာ နိုင်ငံသားတို့သည်လည်း ဗြိတိသျှတို့ကို လိုလားစွာ လက်ခံလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ၃ နှစ်တိုင်တိုင် ပြောက်ကျား တပ်စုများကို တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်း ခဲ့ရလေသည်။ ၎င်းတို့ကို ခုခံသူတို့အား မိမိ နိုင်ငံအတွက် တိုက်ခိုက်ကြသော မြန်မာ မျိုးချစ်များ အဖြစ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ ဓားပြ လူဆိုးများ အဖြစ်နှင့်သာ ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ မည်သို့ ဖြစ်စေ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ဗမာ့သားကောင်း ဗိုလ်မြတ်ထွန်း ကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်မျိုးကို မူကား မြန်မာ့ မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးအနေဖြင့် အသိအမှတ် မပြုဘဲ မနေနိုင်တော့ချေ။ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း အကြောင်းကို ဒါလဟိုဇီက လူပေါင်း ၄,ဝဝဝ ကို အုပ်ချုပ်၍ ဗြိတိသျှတို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တွန်းလှန်နိုင်ကာ ဗြိတိသျှတို့ အသက်ပေါင်း များစွာ ကျဆုံးပြီးမှ အရေးနိမ့်ရသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ စစ်သားကောင်း တဦး အဖြစ် လည်းကောင်း၊ လေးစား အပ်သည်ဟု မှတ်ချက် ရေးသား ထားလေသည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ကရင် မင်းလောင်း တဦးက ခေါင်းဆောင်၍ သူပုန်ထရာ မြစ်ဝက္ဆွန်းပေါ် တခွင်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွား၍ ပဲခူးဒေသတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ငြိမ်ဝပ် ပိပြားစေရန် ရှစ်နှစ် နီးပါး ဆောင်ရွက် ခဲ့ရလေသည်။
ဗြိတိသျှတို့က မိမိတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို အန်တုခြင်း မပြုနိုင်စေရန် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း၌ ကြိုးစား နေကြဆဲ အချိန်တွင် မင်းတုန်းမင်းသည် ကုန်းဘောင်မင်းတို့တွင် အတိုးတက်ဆုံးနှင့် အရည်အချင်း အပြည့်ဆုံးသော မင်းတပါး အဖြစ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း၌ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် နောင်အရှည် ဆက်လက်၍ ဥရောပ တိုက်သားတို့၏ စစ်အင်အားကို မြန်မာတို့ ဘက်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိဟု ဆုံးဖြတ်ထားဟန် တူလေသည်။ မိမိ၏ တာဝန်မှာ ဗြိတိသျှတို့နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ရနိုင်သရွေ့ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းအောင် ကြံဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း နားလည်ဟန် တူသည်။ လတ်မင်းကြီး ဒါလဟိုဇီ ကိုယ်တိုင်က မင်းတုန်းမင်း၏ အကျင့် စာရိတ္တနှင့် နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်သည် မင်းတုန်းမင်းအား မြန်မာ ဘုရင်တို့တွင် လိမ္မာရေးခြား အရှိဆုံး၊ စိတ်အရှည်ဆုံး၊ သဘော အကောင်းဆုံး၊ မင်းဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား စေသည်ဟု ရေးမှတ် ထားလေသည်။
ထိုအချိန်၌ ဗြိတိသျှတို့သည် မြန်မာ့ နန်းတော်တွင် ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ် ခန့်ထားရန် တွန့်ဆုတ်လျက် ရှိနေသည်။ သို့သော် မြန်မာတို့၏ အပြုအမူ အကြံအစည်များကို သိရန် လွန်စွာ အရေးကြီးသောကြောင့် အထောက်တော် အရာရှိများ အဖြစ်ဖြင့်၊ ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်းရှိ လတ္တာလမ်းဟု နာမည်တွင် ရစ်စေသည့် ကပ္ပတိန် လတ္တာနှင့် အာလံမြို့ဟု နာမည် တွင်ရစ်စေသည့် မေဂျာ အာလံတို့ကို ခန့်အပ် လိုက်လေသည်။ ထိုသူတို့ကို မကျေမနပ် သေး၍ မြန်မာ အမျိုးသမီးနှင့် ထိမ်းမြားသော စကော့လူမျိုး ကုန်သည် သောမတ်စပီးယားကို ငှားရမ်း လိုက်ပြန် လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှနှင့် ဆက်သွယ်မှု ရသည့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင် ထားလေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသည် အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရာ ၁၈၅၃ မှ ၁၈၅၄ ခုနှစ် အတွင်း ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ဒေသများတွင် အစာရေစာ ရှားပါး ကြပ်တည်း ခဲ့လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ဘုရင့် အမိန့်ဖြင့် အထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွက်သမျှ ကုလားပဲနှင့် ဂျုံတို့ကို သိမ်းကျုံး ဝယ်ယူရာ၊ ပဲတင်းပေါင်း ၁ဝ,ဝဝဝ နှင့် ဂျုံတင်းပေါင်း ၂ဝ,ဝဝဝ ရသည်။ ပဲကို တင်း ၁ဝဝ လျှင် ကျပ် ၂ဝဝ ဈေးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဂျုံကို ကျပ် ၂၅ဝ ဈေးနှင့် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ကို ရောင်းချသည်။ ဤ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းဖြင့် မင်းတုန်းမင်းသည် အေးချမ်းစွာ မိမိ တိုင်းပြည်ကို ခေတ်မှီ၍ အင်အား တောင့်တင်းသော နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ ရောက်စေရန် လိုလားကြောင်း၊ ထင်ရှား စေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ခရိုင်းမီးယန်း စစ်ပွဲနှင့် အိန္ဒိယ တပ်တွင်း ထောင်ထားမှုတို့ကြောင့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရသော အခါ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှကို ရန်မမူ ငြိမ်းအေးစွာပင် နေခဲ့သဖြင့် မင်းတုန်းမင်း၏ သဘောထား အမှန်ကို ပေါ်လွင် စေခဲ့သည်။
မင်းတုန်းမင်း၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများမှာ များပြား လှသည်။ ၎င်းတို့မှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အတွက် တာဝန် ကျြွေ့ပန်ရန်နှင့်၊ ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ စရိတ်စက သက်သာ ချောင်ချိစေရန် ဟူသော ဝါဒနှင့် ကိုက်ညီခွင့် ရကြလေသည်။
မင်းတုန်းမင်း၏ အကြံအစည်ကို ပထမ အကြိမ် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုက အကောင်အထည် ပေါ်စေခဲ့သည်။ စက်မှု လက်မှု ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး တို့ကိုလည်း နိုင်ငံ အစိုးရပိုင် ပြုလုပ်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခွန်တော် ကောက်ခံခြင်းကို ဖျက်သိမ်းရန် ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်း အရပ်ရပ်များ မတွင်ကျယ်သေးမီ အခြေခံ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရလေသည်။
၁၈၅၄ ခုနှစ်တွင် တနိုင်ငံလုံး၌ သုံးစွဲသော အချိန်အတွယ် အတိုင်းအတာများကို ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်က သုံးခဲ့သည့် အတိုင်း စံပြု သုံးစွဲရမည်ဟု အမိန့် ထုတ်ပြီးနောက် အချိန်အတွယ် အတိုင်းအတာ နမူနာများကို နိုင်ငံအနှံ့ ဝေငှ ဖြန့်ချီလေသည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ ပွင့်တော်မူစဉ်က စ၍ အများပြည်သူတို့သည် အခွန်တော်ကို ဆယ်ဘို့တဘို့ ဆက်သ ခဲ့ရသည့် နည်းအတိုင်း ပြည်သူ ပြည်သားတို့ထံမှ အခွန်တော်ဖြင့် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ယူမည် ဖြစ်၍ မည်သည့် အရာရှိကမျှ တိုင်းသူ ပြည်သားတို့ထံမှ ထိုထက်ပို၍ ကောက်ယူခြင်း မပြုရဟု အမိန့် ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ဤစနစ်သည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံ တခွင်လုံးတွင် ပျံ့နှံ့ သွားလေသည်။ မင်းမှုထမ်းတို့အား လခပေးသည့် စနစ်ကိုလည်း စတင် တီထွင်လေသည်။ ဤ စနစ်မှာ တံစိုး လက်ဆောင် စားတတ်သည့် အလေ့ကို လုံးဝ ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အများ ပြည်သူတို့အား မည်မျှ ပေးသင့် မပေးသင့်ကို ရှင်းလင်းစွာ သိမြင်စေသည်။ ၁၈၆၅ ခုနှစ်၌ မန္ဈလေး နန်းမြို့တော် အတွင်းတွင် ဒင်္ဂါးသွန်း စက်ရုံတခု တည်၍ အရွယ် အလေးချိန် ငွေသား တညီတည်း ဖြစ်သော ဒေါင်းဒင်္ဂါးများကို သွန်းလုပ် စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးကို ပိုမို တွင်ကျယ် စေခဲ့လေသည်။
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် မင်းတုန်းမင်းသည် အထူး ဝါယမ စိုက်ထုတ်ကာ ငွေကုန် ကြေးကျ အတန်များများ ခံခဲ့လေသည်။ ဗြိတိသျှ တို့သည်လည်း မိမိတို့ ပိုင်နက် ဖြစ်သော အောက်မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်မှု အတွက် ကြိုးပမ်း ကြလေသည်။ ဧရာဝတီနှင့် စစ်တောင်း မြစ်ဝှမ်းတို့တွင် မီးရထားလမ်းများ ဖောက်လုပ် ကြသည်။ ရန်ကုန်၊ ပြည် မီးရထားလမ်းသည် ၁၈၇၇ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးလေသည်။ အစိုးရ သင်္ဘောများကို ဝယ်ယူလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီငယ်ကိုလည်း ၁၈၆၈ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီ သင်္ဘော ကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် အစိုးရမှ အသိအမှတ် ပြုလိုက်လေသည်။ ဦးစွာ ပထမ မန္ဈလေးသို့ တပတ်တခါ သင်္ဘော ထွက်စေ၍ ဗန်းမော်သို့ တလ တကြိမ် ထွက်စေသည်။ ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီက သင်္ဘောသစ် ၅ စင်း နှင့် ကုန်တွဲ ၆ စင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းလေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရခိုင်နှင့် တနင်္သာရီ ဒေသများရှိ ဆိပ်ကမ်း မြို့ငယ်များ ကိုလည်း ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ မီးသင်္ဘော ကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောများဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် ကူးလူး ဆက်ဆံ ခဲ့လေသည်။ ပီနန်နှင့် စင်္ကာပူ သို့လည်း သင်္ဘော မှန်မှန် ထွက်စေ ခဲ့လေသည်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် အီဂျစ် နိုင်ငံ၌ စူးအက်တူးမြောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသော အခါ ဥရောပမှ သင်္ဘောများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက် ပေါက်ရောက် လာကြလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် သင်္ဘောကြီး ၅ စင်းကို ဝယ်ယူကာ သင်္ဘောငယ်ပေါင်း များစွာလည်း လက်ဝယ် ရှိလေသည်။ ထိုမျှမက ကုန်သည်များ၏ လှေငယ်များကိုလည်း ငှားရမ်း အသုံးပြု နိုင်လေသေးသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် ကြေးနန်း စနစ်၏ တန်ခိုးကို နားလည်သူ ဖြစ်သည့် အတွက် မြန်မာ လူငယ်များကို ကြေးနန်းရိုက် အတတ် သင်ကြားရန် အမိန့် ထုတ်သည်။ မကြာမြင့်မီ မို့စ်ကုဒ် စနစ်ကို အခြေခံပြု၍ ကြေးနန်းပို့သည့် စနစ်ကို သင်ကြားစေကာ မြန်မာ စာလုံးဖြင့် မို့စ်ကုဒ် စနစ်ကို တီထွင်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာ့ သယံဇာတ ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်အောင် ပြုလုပ်၍ လိုသမျှ ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြင်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို အားကိုးနေရန် မလိုဟု ကောင်းစွာ သဘောပေါက် လေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် စောစီးစွာပင် မြန်မာနိုင်ငံသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းထွက် သတ္ထု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ သစ်လုပ်ငန်း များကိုသာ အားကိုး နေလျှင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် လည်းကောင်း၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းတွင် လည်းကောင်း၊ လွန်စွာ နိမ့်ကျမည်ကိုလည်း သိနားလည်ဟန် တူလေသည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှု လုပ်ငန်း အတွက် စက်ရုံ အမျိုးမျိုးကို ဥရောပမှ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်စေကာ တခါတရံ ဥရောပ တိုက်သားများကိုပင် ငှားရမ်း အုပ်ချုပ် စေခဲ့သည်။ စက်ရုံများမှာ အထည်အလိပ် (အထူးသဖြင့် ဝါဂွမ်းနှင့် ပိုး) ရက်လုပ်သည့် စက်ရုံများနှင့် ချိပ်၊ ရှား၊ မဲနယ်ချက်ရုံ၊ သကြားစက်၊ လွှစက်၊ ဆန်စက်၊ ဂျုံစက်တို့ အပြင် သေနတ်နှင့် အမြောက် သွန်းလုပ်သော စက်ရုံများ ဖြစ်လေသည်။ ၁၈၇၂ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော် အမျိုးမျိုးသော စက်ရုံပေါင်း ၅ဝ မက တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် စက်ရုံ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်တာ မှန်သမျှကို မိမိ စိတ်ချ ယုံကြည်ရသော မက္ခရာ မင်းသားကြီးအား အပ်နှင်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား ကုန်သည်များနှင့် ပြိုင်ဆိုင် နိုင်လောက်အောင် အရင်းအနှီး တောင့်သူမှာ မင်းတုန်းမင်း တပါးသာလျှင် ရှိလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရောင်းဝယ်ရေး နှစ်ခုစလုံးကို ဆောင်ရွက် လေတော့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် နိုင်ငံပ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုကို ချဲ့ထွင်ရန် ယူနန်နှင့် ကုန်ကူးသန်းမှုကို အားပေးခြင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ပါရှား နိုင်ငံများသို့ သံ စေလွှတ်ခြင်း၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်တို့နှင့် စီးပွားရေး အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ရရန် ကြိုးစားခြင်း စသည်တို့ကို ပြုခဲ့သည်။
တိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏ သဘောတွင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရာ၌ ဘုရင် လက်ဝါးကြီးအုပ်သည့် စနစ်သည် ကာကွယ်မှုကို ပေးထားသည်ဟု ယူဆ ကြလေသည်။ ပြည်တွင်း ရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အခွန်မဲ့ ဖြစ်လေသည်။ အများ ပြည်သူတို့သည် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာကို စိုက်ပျိုးနိုင်၍ ပြည်တွင်း ဈေးများတွင် လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချနိုင်ခွင့် ရှိသည်။ နယ်စပ် ဒေသများကို ကျော်လွန်၍ အရေးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း တခုကို ရောင်းချလိုလျှင် ဘုရင့် ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ဖြစ်စေ၊ လိုင်စင် ရထားသော ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ဖြစ်စေ၊ ရောင်းချရခြင်း သာလျှင် ချုပ်ချယ်မှု တရပ် ဖြစ်လေသည်။ အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရင် ကိုယ်စားလှယ်တော်များသည် ကုန်တင်သွင်း သူများထံမှ အလုံးအရင်း ချုပ်၍ ဖြစ်စေ၊ မြန်မာ လယ်သမားများ ထံမှ တိုက်ရိုက် ဖြစ်စေ၊ ဈေးသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူသည်။ အွေ့ကးပင် ရနိုင်သေးသည်။ မြန်မာ့ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရန်ကုန် ပေါက်ဈေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း မရှိပါက မဒရပ်နှင့် ကာလကတ္တားမြို့များမှ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူနိုင်ခွင့် ရှိလေသည်။
ခြုံ၍ ကြည့်သော် မင်းတုန်းမင်း၏ စီးပွားရေး စီမံကိန်းသည် အောင်မြင်သည်ဟု ဆိုရာသည်။ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ ထွက်ကုန်၊ ဝင်ကုန် ပစ္စည်း တန်ဖိုးမှာ
မင်းတုန်းမင်း၏ နန်းသက် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် မြန်မာ့ ကုန်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး၏ တန်ဖိုးသည် ၅ ဆ တိုးခဲ့၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း အခြေလှ၍ လာတော့သည်။ မင်းတုန်းမင်း၏ အောင်မြင်မှုကို ဥရောပ တိုက်သားတို့ မရှုစိမ့် ကြတော့ချေ။ အကြောင်းကြောင်းတို့ကို ထောက်၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်သော ဘုရင် စိုးစံ နေခြင်းသည် မိမိတို့ အတွက် ရနိုင်သမျှသော အမြတ်အစွန်းကို မရစေရန်၊ ဟန့်တား ပိတ်ပင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ထင်လာကြသည်။
ဥပမာ ဆိုသော် အောက်မြန်မာ နိုင်ငံက ၅ ကျပ်ဈေး ပေး၍ ဝယ်ယူရသော ရေနံချေးကို မြန်မာဘုရင်က ၂ ကျပ်ခွဲ ဈေးဖြင့် ဝယ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ၂၅ ကျပ်ဈေးနှင့် ရနိုင်သော ဝါဂွမ်းကို မြန်မာ ဘုရင့်ထံမှ ၃၅ ကျပ် ဈေးနှင့် ဝယ်ယူရသည်။ ခဲမှာ ၇ ကျပ် ဈေးရင်း ရှိသော်လည်း ၁၅ ကျပ် ဈေးနှင့် ဝယ်ရသည်။ မဒရပ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းဘေး ဆိုက်ကပ်သော အခါ ဆန်ကို အမြတ်အစွန်း များစွာနှင့် တင်ပို့နိုင်သည့် အချိန်တွင် ဘုရင့် ကိုယ်စားလှယ်များက ဝယ်ယူပြီး ဖြစ်နှင့်သောကြောင့် မကျေမနပ် စိတ်ဓာတ် ပွားများလာသည့် ကုန်သည်စု နှင့်အတူ ဗြိတိသျှ အစိုးရသည်လည်း မကျေမချမ်း ဖြစ်၍ လာသည်။ အကယ်၍ အထက် မြန်မာနိုင်ငံသာ ဗြိတိသျှတို့ ပိုင်နက် နိုင်ငံ အတွင်း၌ ပါဝင်ခဲ့လျှင် ဗြိတိသျှ ကုန်သည်စု အဖို့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး တွင်ကျယ်လာ၍ အမြတ်အစွန်း ပိုမို ရနိုင်မည် ဟူသော အတွေးသည် အလျင်အမြန် ပေါက်ဖွားလာ ခဲ့လေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး ဖူလုံရန် ကြိုးစားမှု တခုတည်းကိုသာ ပြုလုပ်ခဲ့သည် မဟုတ်ချေ။ မိမိနှင့် မင်းပြိုင်ဖြစ်သော ယိုးဒယားဘုရင် မဟာမောင်းကွတ် ကဲ့သို့ မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ခဲ့သည်။
၁၈၅၅ ခုနှစ်တွင် နန်းမတော် မိဖုရားကြီးနှင့် အပေါင်းသင့်သော မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်ရာဇာအား သံအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်စေ၍ ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံချုပ် ရှိရာ ကာလကတ္တားမြို့သို့ စေလွှတ် လိုက်သည်။ သံအဖွဲ့ကို ကာလကတ္တား၌ ကောင်းစွာ ပြုစု ဧည့်ခံသော်လည်း ဒါလဟိုဇီသည် မြန်မာမင်းထံ ပဲခူးကို ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် အရေးကို လက်ခံ ဆွေးနွေးခြင်း လုံးဝ မပြုချေ။ နေ အထွက် အဝင် ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဗြိတိသျှ ပိုင်နက် အတွင်းတွင် ပဲခူးသည် တည်မြဲလျက် ရှိရမည်ဟု မြန်မာသံတို့အား ပြောကြား လိုက်လေသည်။ မြန်မာ သံအဖွဲ့ ပြန်သောအခါ အာသာဖယ်ရာ ခေါင်းဆောင်သော ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြန်အလှန် စေလွှတ်သည်။ ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ကို မြန်မာတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုစုကြ၍ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်တခု ချုပ်ဆို ဖြစ်ကြလေသည်။ ထိုစာချုပ် အရ ဧရာဝတီမြစ် တလျှောက်လုံးတွင် ဗြိတိသျှ ကုန်သည်တို့အား ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ခွင့် ပေးလေသည်။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် နယ်စပ် အကောက်အခွန်များ လျော့ပေါ့ရေးနှင့် အထက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပဲခူးမှ ဆန်တင်ပို့ရေးနှင့် ပတ်သက်သော အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နယ်စပ် အခွန် ကောက်ခံရေး တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုလေသည်။
၁၈၅၇ ခုနှစ်တွင် ယိုးဒယားနှင့် ချစ်ကြည်စွာ ဆက်ဆံကြောင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်ဖြင့် ယိုးဒယား သာသနာပိုင် ဆရာတော်ထံ ဆက်ကပ်ရန် အလှူ ပစ္စည်းနှင့် အဖွဲ့ တဖွဲ့ကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ ယိုးဒယား ဘုရင်ကလည်း မြန်မာ သာသနာပိုင်ထံ လှူဖွယ် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ဆက်ကပ် လိုက်လေသည်။
၁၈၆၂ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် တဦးကို မြန်မာတို့ နေပြည်တော်၌ နေထိုင်ရန် တကြိမ် ထပ်မံ စေလွှတ်ပြန်သည်။ ယခု တကြိမ်တွင် နေပြည်တော်မှ မန္ဈလေးမြို့ ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၇ ခုနှစ်၌ မင်းတုန်းမင်းသည် မန္ဈလေးသို့ ရွှေ့ပြောင်း နန်းစံခဲ့သည်။ ဖယ်ယာ၏ ရာထူးကို ဆက်ခံသော ဖိုက်ခ်ျနှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့သည် ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး စာချုပ်သစ် တရပ်ကို ချုပ်ဆို ပြန်လေသည်။ စာချုပ် အနေအားဖြင့် အရေးမကြီးလှ သော်လည်း စာချုပ်ပါ အချက်များကို ထောက်ထားခြင်းဖြင့် ဗြိတိသျှတို့၏ တင်းမာလာသော သဘောထားကို ထင်ရှားစွာ သိမြင်ရသည်။ ဗန်းမော်မှ တဆင့် တရုတ် နိုင်ငံနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်လိုသည့် ဆန္ဒမှ ဗြိတိသျှတို့တွင် တနေ့တခြား စွဲလန်း လာခဲ့ရာ၊ ဗြိတိသျှတို့သည် တရုတ်နှင့် ကူးသန်းရေး ဖြစ်ထွန်းစေမှုကို ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ဗန်းမော်တွင် ဗြိတိသျှ နိုင်ငံရေး ကိုယ်စားလှယ် တဦး ထားရန် စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် အခြား ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများ အပြိုင်အဆိုင် ကုန်ကူးသန်းလျက် ရှိခြင်းကြောင့် ဗြိတိသျှတို့သည် ဤသို့သော ဆန္ဒ ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဖိုက်ခ်ျနှင့် ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်အရ၊ မြန်မာတို့သည် ဗြိတိသျှ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဝန်ရှင်တော် မင်းကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လက်နက် ခဲယမ်းများကို သွင်းခွင့် ရရှိရာ၊ ၎င်း စာချုပ်နှင့် အတူ ပူးတွဲပါသည့် အချက်တွင် ဝန်ရှင်တော် မင်းကြီးကလည်း ယေဘူယျ အားဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ကို ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပါလေသည်။ သို့သော် လက်တွေ့အားဖြင့် လက်နက်များ တင်သွင်းရန် လျှောက်လွှာ တင်သော အခါ ဗြိတိသျှတို့သည် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပင် ကတိ ဖောက်ဖျက်ကာ ငြင်းပယ် လိုက်လေသည်။
အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုမှာ ကျေနပ်ဖွယ် မရှိသဖြင့်၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံခြင်း ပြုလျှင် ပိုမို သင့်လျော်မည်ဟု ယူဆကာ မင်းတုန်းမင်းသည် အင်္ဂလန်သို့ သံအဖွဲ့ တဖွဲ့ စေလွှတ်လေသည်။ ၁၈၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကင်းဝန်ထောက်မင်းကြီး မဟာစည်သူကို အဂ္ဂမဟာ သေနာပတိ ဝန်ကြီး သုံးပါးတွင် တပါး အပါအဝင် အဖြစ် ချီးမြှင့်ပြီးလျှင် သံအဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်စေ၍ ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်လေသည်။
သံအဖွဲ့၏ ခရီးစဉ်ကို မှတ်တမ်းတင်သည့် "ကင်းဝန်မင်းကြီး မှတ်တမ်း" သည် မြန်မာ စာပေ သမိုင်းဝင် စာပေ ဖြစ်လေသည်။ ထို မှတ်တမ်းကို ထောက်၍ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု မည်မျှ ကြီးမားပုံကို စေ့ငှစွာ သတိမူ ဂရုပြုတတ်သည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံရုံမျှမက၊ အဆင့်အတန်း မြင့်သော နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်း ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလေသည်။ မြန်မာတို့သည် နိုင်ငံတကာနှင့် သင့်မြတ်စွာ ဆက်ဆံရေးကို လိုလားကာ နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ် ပြုရေးကို မွတ်သိပ်စွာ လိုလားလျက် ရှိကြောင်းကိုလည်း သိနိုင်လေသည်။ ထို့ပြင် နယ်ချဲ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ စစ်အင်အားကို အမီလိုက်ရမည့် ဤ ခေတ်အခါတွင် မိမိတို့ နိုင်ငံတခုလည်း အထီးတည်း ရပ်တည်နေပါက အန္ဈရာယ် များလှသည်ကို သဘောပေါက် ကြကြောင်းကိုလည်း သိရလေသည်။
သံအဖွဲ့သည် လမ်းခရီးတွင် ရပ်တန့်သည့် အခါတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေကြောင်း ထင်ရှားစေရန် ကြိုးစား ခဲ့လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အဆက်အသွယ် ပြုရန်လည်း စကား ကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော် ထိုအချိန် အခါက ကမ္ဘာတွင် အင်အား အကြီးဆုံး ဖြစ်နေသော ဗြိတိသျှ နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် လျာထားသည်ကို သိပြီး ဖြစ်နေကြ သောကြောင့် အခြား ဥရောပ နိုင်ငံများသည် မြန်မာတို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် နှောင့်နှေးလျက် ရှိကြသည်။
အင်္ဂလန်သို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြင့် မြန်မာတို့ မျက်စိ ပွင့်ခဲ့ကြလေသည်။ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဘုရင်သည် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ငြင်းဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို သိမြင် လာကြသည်။ ဥပဒေဖြင့် အုပ်ချုပ်ရသော အင်္ဂလန် ပြည့်ရှင် ဘုရင်မကြီးသည် မှူးမတ်ကြီးများ၏ အကြံပေး လျှောက်ထားချက် အရ မြန်မာ သံအဖွဲ့ကို ပြေပြစ် ကြည်သာစွာ လက်ခံ ခဲ့သော်လည်း မိမိ၏ အင်ပါယာကို ချဲ့ထွင် နေသည့် ဗြိတိသျှ အမှုထမ်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံအား ခြိမ်းခြောက် နေမှုကိုမူ သက်သာ လျော့ပါးစေရန် စွမ်းဆောင်ခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်းကို မြန်မာ သံအဖွဲ့က တွေ့ကြုံ ခဲ့လေသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် မြင်ကွန်း၊ မြင်းခုံတိုင်၊ မင်းသား နှစ်ပါး၏ ထီးနန်း လုပ်ကြံမှုကို အချက်ကောင်း ယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မည့် အန္ဈရာယ်ကလည်း ရှိလေသည်။ မင်းသား နှစ်ပါးတို့သည် ၁၈၆၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ပုန်ကန်ကြရာ အောင်မြင်ခြင်း မရှိသည့် အတွက် ဗြိတိသျှ ပိုင်နက် အတွင်းသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံလေသည်။ ဗြိတိသျှ ပိုင်နက်တွင် အကျယ်ချုပ် သဘောဖြင့် သက်ရောက်နေရာ ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် အကျယ်ချုပ်မှ ထွက်ပြေး၍ ထီးနန်းကို တကြိမ် လုပ်ကြံကြ ပြန်သည်။ ၁၈၈၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၈၂ ခုနှစ်များတွင် ပုန်ကန်မှု ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်ပြန်၍ မင်းသား နှစ်ပါး၏ နောက်လိုက်များမှာ အသုတ်လိုက် ကွပ်မျက်ခြင်း ခံရလေသည်။ ဤတွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ရိုင်းစိုင်း ရက်စက်လှသည့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကို ဖြုတ်ချ၍ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေး၌ သွတ်သွင်းရန် သင့်သည်ဟုွွေ့ကးကြော် အရေးဆို ကြတော့သည်။
ဗြိတိသျှတို့နှင့် သင့်တင့်ရန် ကြိုးစားမှုတွင် မင်းတုန်းမင်း ကဲ့သို့ မည်သည့် မြန်မာမင်းကမျှ မပြုခဲ့ဘူးချေ။ သို့သော် ထိုသို့ ကြိုးစားရာ၌ မြန်မာ ဘုရင်တို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အသရေကို ထိခိုက်စေမည့် အမှုမျိုးကိုကား မင်းတုန်းမင်းသည် ရှောင်ရှား ခဲ့လေသည်။
၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် မန္ဈလေးသို့ ရောက်နေသော ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖော်ဆိတ်သည် နန်းတွင်းသို့ ဖိနပ်စီး၍ မဝင်ရသော နန်းတွင်း အစဉ်အလာကို ကန့်ကွက်ခြင်း ပြုလေသည်။ အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံချုပ် အသစ်ကလည်း ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်များ မြန်မာ နန်းတော်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သော အခါ ဖိနပ်ခ္ဆွတ်ရသည့် အစဉ်အလာကို ရပ်တန့်သင့်ပြီဟု အရေးဆိုသည်။ ထိုနေ့မှ စ၍ မင်းတုန်းမင်းသည် ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဖူးမျှော်ခွင့် မပေးတော့ချေ။
မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးအား ထိပါးလာသည့် အန္ဈရာယ်များကို ဖယ်ရှား၍ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ရန် ခေါင်းဆောင် ကြိုးပမ်းလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အချုပ်အချာ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာက သိအောင် အားထုတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ထောင် အချင်းချင်း အဆက်အသွယ် အကူးအသန်း ခက်ခဲမှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဗြိတိသျှတို့၏ တန်ခိုးအာဏာက ဟန့်ထား သကဲ့သို့ ရှိသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှု အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ပြည်ထောင် အချင်းချင်း အကူးအသန်း အခက်အခဲ ဝေးလံခြင်းကြောင့် မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှု အချည်းနှီး ဖြစ်ရခြင်းကို အမေရိကန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ အမေရိကန် သမတ ဘူကန္နန်သည် ဂျပန်အား အမေရိကန် ရေတပ်မှူး ပယ်ရီက လက်ဆောင် အဖြစ်ပေးသည့် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် မောင်းသော သင်္ဘောမျိုးကို မြန်မာဘုရင် ထံသို့လည်း ပေးသင့်ကြောင်း အမေရိကန် သာသနာပြု ကင်းကိတ်၏ အကြံပေးချက်ကို လက်ခံလေသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်းက အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ မြန်မာ လူငယ် ၁၂ ဦးခန့် စေလွှတ်လိုသည့် ဆန္ဒကိုမူ တိုင်းပြည်ချင်း ဝေးကွာလွန်းမှု ရှိနေသောကြောင့် ဂရုတစိုက် လိုက်လျော ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုခဲ့ချေ။
မင်းတုန်းမင်း၏ အားထုတ်မှုများသည် အချည်းနှီး ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းကို မြန်မာတို့ စေလွှတ်သည့် ကင်းဝန်မင်းကြီး သံအဖွဲ့ အင်္ဂလန် ဆိုက်ရောက်လာစဉ်က စိန့်ဂျိမ်း နန်းတော်၌ ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် သံအမတ်၏ ဝေဖန်ချက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ "ဤ နန်းတော်သို့ သံတမန်တို့၏ အဆောင်အယောင်ဖြင့် ရောက်လာသော်လည်း ဘုရင်မကြီး ရှေ့မှောက်သို့ သွင်း၍ သဝဏ်လွှာများကို ဆက်သသော အခါ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံခြားရေးရာ ဝန်ကြီးက ဖေးမ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲ အိန္ဒိယ ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အတွင်းဝန်နှင့် တွဲဖက်၍ အခစား ဝင်ကြရသည်။ ဤအချက်တွင် ထူးခြားသည့် အဓိပ္ပါယ် ပါရှိသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကား ဗြိတိသျှ အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ဂရိတ် ဗြိတိန်၏ အရှေ့တလွှား ပိုင်နက်များ ပေါ်တွင် ထားသော ဝါဒ အရသာလျှင် ဆက်ဆံလို၍ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အပေါ်တွင် ထားသော သဘောမျိုး မဟုတ်" ဟု ဝေဖန် ထားလေသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည် အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ အင်ပါယာ အတွင်းသို့ တနေ့နေ့၌ သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒ ချမှတ်ပြီး ဖြစ်၍ အကြောင်းပြ ကောင်းမည့် အချက်နှင့် အခွင့်အခါကိုသာ စောင့်ဆိုင်း နေသည်မှာ ထင်ရှားလှသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ သံအဖွဲ့သည် အီတလီနှင့် ပြင်သစ် အစိုးရတို့နှင့် သင့်မြတ်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ စာချုပ်များကို ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့၏ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ကျူးလွန်မှုများကို ဟန့်တားနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ဗြိတိသျှတို့၏ ဝန်တို မိစ္စာ စိတ်ထားကိုပင် နှိုးဆွ ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး ခြေလှမ်းကို အမြန် လှမ်းစေ သကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
မြန်မာမင်းနှင့် ဗြိတိသျှတို့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်စလုံးသည် ဖိနပ် ပြဿနာဟု ခေါ်သော အရေးတွင် အလျှော့ မပေးကြ သဖြင့် ဗြိတိသျှ အစိုးရနှင့် မြန်မာ ဘုရင်တို့သည် ဆက်သွယ်မှု ပြတ်စဲခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့သည် ဒုက္ခ ပေးတော့မည်မှာ ထင်ရှားလှသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်းသည် မြန်မာမင်းတို့ အစဉ်အလာ ကျင့်ဝတ် အတိုင်း သာသနာ့ ဒါယကာ ဟူသော ဘွဲ့နှင့်အညီ မြန်မာမှု မြန်မာကိစ္စ တို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မြဲ ဆောင်ရွက် ခဲ့လေသည်။
မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သော အခါ ဆရာတော်များနှင့် မှူးမတ် ပညာရှိတို့ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးလျှင် မင်း နေပြည်တော်ကို မန္ဈလေးသို့ လျှောက်ထားရန် သင့် မသင့် လျှောက်ထားသည်။ အများက သဘော တူညီကြ သဖြင့် မန္ဈလေးမြို့ကို တည်ဆောက်ကြသည်။ ထူထဲသော မြို့ရိုးကြီးများ ကာရံလျက် နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားတို့ နေထိုင်ရန် ရွှေရောင်ဝင်းသည့် ဘုံခုနှစ်ဆင့် ပြဿဒ် တင်၍ နန်းတော်ကို တည်ဆောက် လေသည်။ မန္ဈလေး နန်းတော်သည် မြန်မာ အမျိုးသားတို့၏ ဇာတိမာန် တက်ွ့ကရာ အာရုံ စူးစိုက်ရာ အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ မန္ဈလေးကို တည်ဆောက်ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး ကိစ္စနှင့် စီးပွားရေး ကိစ္စ မြားမြောင် နေသည့် ကြားမှပင် မင်းတုန်းမင်းသည် ဆည်မြောင်း ကန်ချောင်းတို့ကို ပြုပြင်သည်။ ဘုရား ပုထိုးများကိုလည်း လှည့်လည် ဖူးမျှော်၍ စေတီ တည်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်သည်။
ပုန်ကန် ထွ့ကလိုသော စော်ဘွားများ ကျေနပ်စေရန် စော်ဘွားတို့၏ သမီးတော်၊ နှစ်မတော်တို့နှင့် လက်ဆက်ခြင်း ပြုလေသည်။ ပညာကျော် ဝါရင့် ဆရာတော်ကြီးများအား ဘွဲ့တံဆိပ်များ ကပ်လှူ၍ ပထမပြန် စာမေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးသည်။ ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာကိုလည်း တင်ခဲ့သည်။ သင်္ဃာတော် အပါး နှစ်ထောင်ကျော်ကို နေပြည်တော်တွင် သီးတင်း သုံးစေ၍ ပိဋကတ်တော်များကို စီစစ် ရေးသား ပြုစု နေဆဲတွင် နေ့စဉ် မပြတ် ဆွမ်းကွမ်း လှူးဒါန်းသည်မှာ လပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့လေသည်။ တည်းဖြတ်ပြီးသော ပိဋကတ်တော်များကို သင်္ဂါယနာတင် အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သာသနာ ငါးထောင် တည်ရန်ဟု ရည်စူး၍ လည်းကောင်း၊ ကျောက်ထက် အက္ခရာ တင်စေသည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ရန်ကုန်သို့ စေလွှတ်၍ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်တွင် ယနေ့တိုင် ဖူးမျှော် နေရသည့် ရတနာ အမျက်ဖြင့် ချယ်လှယ်ထားသော ထီးတော်ကို တင်စေရာ၊ ဗြိတိသျှတို့က ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်း လွန်စွာ ဂုဏ်ယူ မြတ်နိုး သော ဘွဲ့မည်ကား ပဉ္စမ သင်္ဂါယနာတင် မင်းတရားကြီး ဟူသော ဘွဲ့ ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာမင်းတို့ အစဉ်အလာ ပြုနေကျ ဖြစ်သည့် အတိုင်း နိုင်ငံရေး အားဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့နှင့် စည်းလုံးရေး အတွက် မင်းတို့၌ မိဖုရား မြောက်များစွာ ထားခဲ့ရာ၊ မဟာသွေး မဟာနွယ်တို့ များစွာ ပေါက်ဖွားခဲ့သည်။ သို့သော် သားတော်များစွာ ထွန်းကားခဲ့သည့် အတွက် ပြဿနာ တရပ် ပေါ်ထွက် လာရသည်။ ညီတော် နန်းလျာ အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ ကနောင်မင်းသားကို သားတော် မြင်းခုံတိုင် မင်းသားက လုပ်ကြံပြီး သည့်နောက် နန်းလျာ ခန့်အပ်ရေးမှာ ပြဿနာ ဖြစ်၍ နေလေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် သားတော်ကြီး တပါးပါးကို အတိအလင်း နန်းလျာအဖြစ် ကျေညာပါက ထိုနန်းလျာ သားတော်၏ အသက်ဘေးသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်မည်ကို သိဟန် တူသည်။ သားတော် အများအပြားတွင် မင်းတုန်းမင်းကို သစ္စာ စောင့်သိ၍ အရည်အချင်း ပြည့်သော သားတော်ကြီးများ ရှိသည်။ နိုင်ငံတော် စက်ရုံများကို ကြည့်ကြပ်ရသော မက္ခရာ မင်းသားသည်၊ သို့မဟုတ် ညောင်ရမ်းမင်းသည်၊ အရည်အချင်း ပြည့်သော မင်းသား ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် မင်းတုန်းမင်းသည် ကံကုန်မည့် နေ့တိုင်အောင် မည်သည့် သားတော်ကိုမျှ ရွေးချယ်လိုကြောင်း မပြခဲ့ချေ။
နန်းလျာ ခန့်အပ်ရေး ပြဿနာကို မင်းတုန်းမင်း နတ်ရွာ စံခါနီးတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ အလယ် နန်းမတော် မိဖုရားနှင့် ကင်းဝန် မင်းကြီးတို့က အဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်လေသည်။ ၎င်းတို့ ရွေးချယ်သော နန်းလျာသည် မိဖုရားငယ် တပါး၏ ဝါနုသေးသော သားတော် သီပေါမင်းသား ဖြစ်သည်။ သီပေါ မင်းသားသည် မိဖုရားကြီး၏ သမီးငယ် စုဖုရားလတ်နှင့် ချစ်ခင် ရည်ငံလျက် ရှိသဖြင့် မိဖုရားကြီးက သမီးတော်၏ ချစ်သူ နန်းတက်လျှင် သမီးတော်သည် မိဖုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်၍ မိမိလည်း သြဇာ လွှမ်းမိုး ချယ်လှယ် နိုင်မည်ဟု ရည်ရွယ်သည်။
ကင်းဝန်မင်းကြီးမူကား ဥရောပတိုက်မှ ပြန်ရောက် လာပြီးသည့်နောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စည်းမျဉ်း ဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်သော ဘုရင် စနစ်ကို တည်ထောင်ရန် လိုလားခဲ့သည်။ ကင်းဝန် မင်းကြီးသည် ဤ မျှော်လင့်ချက်ကို မင်းတုန်းမင်း သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ်က လျှောက်တင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ရာ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ကင်းဝန်မင်းကြီး လျှောက်တင်ပြချက်ကို အလိုမကျ မျက်မာန် ရှခဲ့ဟန် တူသည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးကို "ပြည့်ရှင် ဘုရင်အား လခစား အဖြစ် ခိုင်းစေ လိုသလော" ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ယခုတမူ မင်းတုန်းမင်းသည် သေငယ်ဇောနှင့် မျော၍ နေချေပြီ။ အင်အား ပြည့်စုံ၍ စိတ်ဓာတ် ရင့်သန်သော ဘုရင်သည် မိမိ၏ အကြံအစည် လိုလားချက်ကို လက်ခံမည် မဟုတ်ဟု ကင်းဝန်မင်းကြီး သိနားလည် လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် အလယ် နန်းမတော် မိဖုရားနှင့် တကြိတ် တဉာဏ်တည်း အကြံအစည် ပြုကြလေသည်။ ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်တော်၏ အစီရင်ခံစာတွင် သီပေါမင်းသားကို စည်းမျဉ်း ဥပဒေ အရ စိုးစံသော မင်း အဖြစ်ဖြင့် မြန်မာ နန်းပလ္လင်တွင် တင်မြှောက်မည် ဟူသော ကတိကြောင့် ကင်းဝန်မင်းကြီး၏ ထောက်ခံချက်ကို ရဟန်တူသည်ဟု ရေးသားထားသည်။
အစဉ်အလာ ရှိသည်မှာ မှူးကြီး မတ်ကြီးများသည် မည်သည့် မင်းသားကို နန်းလျာ တင်လိုကြောင်း ရွေးချယ်စေသည်။ မှူးမတ် အပေါင်းတို့ စုရုံး၍ မင်းသားတို့ အမည် စာရင်းကို ကြည့်ရှုနေဆဲ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် နန်းရင်ပြင်သို့ ထွက်လာကာ သီပေါမင်းသား၏ အမည်ဘေးတွင် ကြက်ခြေ ခတ်လိုက်လေသည်။ ချက်ခြင်းပင် သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် သဘောတူကြောင်း မှူးကြီး မတ်ကြီးတို့က တင်လျှောက် ကြလေသည်။ ထို့နောက် အခြား မင်းသားများကို ခမည်းတော်အား နောက်ဆုံး အကြိမ် ဖူးမျှော်ရန် မင်းမိန့်ဖြင့် ဆင့်ခေါ် လေသည်။ ရောက်လာသော မင်းသား အားလုံးကို အလယ် နန်းမတော်၏ အမိန့်ဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခြင်း ပြုလေသည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးက ခတ်မဆိတ်နေ၍ လစ်လျူ ရှုခဲ့သည်။ ၁၈၇၈ ခုနှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး နတ်ရွာ စံလွန်သော အခါ မင်းညီ မင်းသားပေါင်း များစွာ ပျက်စီးကြသည်။ အချို့လည်း နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ပြေးကြသည်။ အချို့လည်း ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ထားခြင်း ခံကြရသည်။ ထိုကြောင့် သီပေါမင်းသည် မြန်မာ့ နန်းပလ္လင်တွင် ပြိုင်ဘက်မရှိ စိုးစံ ရလေတော့သည်။
အောက်မြန်မာနိုင်ငံအား ဗြိတိသျှတို့က သိမ်းပိုက် လိုက်ခြင်းကို မြန်မာတို့ မည်သည့် အခါမျှ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ သို့သော် နေပြည်တော်...
Credit by - ကိုမျိုးမျိုးကျော် (facebook)
News of Mandalay © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings